FBSသည် CFIမှ "Best Copy Trading Application Global-2018"ဆု လက်ခံရရှိသည့်အတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်! ကျွန်တော်တို့ CopyTrade ပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးရာတွင် ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ ဤဆုသည် ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ရောင်းဝယ်သူများ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကာ၊ သူတို့ပူးပေါင်းမှုမှ အကျိုးအမြတ်များရနိုင်အောင် အဆင်ပြေပြီး၊ အလွယ်တကူသုံးနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းတစ်ခု တီထွင်ရန်ဖြစ်သည်။ ခုဆို ကျွန်တော်တို့အားစိုက်ထုတ်မှုအား အသိမှတ်ပြုခံရကြောင်း မြင်ပြီးဖြစ်သည်! ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ထပ်ဆင့်အောင်နိုင်မှုဖြစ်သည် - မကြာသေးမီက၊ CFI.co သည်လည်း FBSအား “Best Forex Broker Asia-2018” ဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးသည်။"
FBSသည် ဖောက်သည်များအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအားအစဉ် တိုးမြှင့်လျှက်ရှိသည်။ စိတ်ချယုံကြည်ရသော အကျိုးဆောင်နှင့်ရောင်းဝယ်ပါ၊ FBSကိုရွေးချယ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်!